घरेलु मोल्ड, किचनवेयर मोल्ड, क्रेट मोल्ड - HEYA
हेया मोल्डले उच्च गुणवत्ता र उच्च मानक प्लास्टिक मोल्डहरू निर्माणमा जोड दिन्छ, जुन ग्राहकहरूको लागि सञ्चालन र मर्मत गर्न सजिलो छ।
हेया मोल्डले ग्राहकको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दछ व्यक्तित्व अनुकूलित र एक-स्टप मोल्ड समाधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माध्यमबाट।
हेया मोल्डले ग्राहकहरूको अनुरोध अनुसार उत्पादनहरू र मोल्डहरू डिजाइन र नयाँ परियोजनाहरूको लागत बचत गर्न, उनीहरूको व्यवसायलाई बढी लाभदायक र उच्च-उपज प्रदान गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
हेया मोल्डले विभिन्न प्रकारका उन्नत प्रशोधन उपकरणहरू अपनाउँदछन्, जुन प्लास्टिक मोल्डहरू बनाउन समृद्ध अनुभवको साथ ग्राहकहरूको लागि अधिक उपयुक्त र स्थिर मोल्डको अन्वेषण गर्दछ।
हेया मोल्ड १० बर्ष भन्दा बढिमा प्लास्टिक मोल्ड निर्माणमा विशेषज्ञ छ, जस्तै घरेलु मोल्डहरू, किचनवेयर मोल्डहरू, होम एप्लिस मोल्डहरू, उद्योग र कृषि मोल्डहरू र त्यस्तै। अनुकूलन र समयमै उन्नति "मुख्य मानको रूपमा, ग्राहकहरूलाई एक स्टप मोल्ड समाधानको साथ उच्च गुणस्तरको प्लास्टिक मोल्डहरू प्रदान गर्दै।
मोल्ड बेस के हो? थिच्ने वा recompressing द्वारा विशिष्ट पाउडर उत्पादनहरूको उत्पादनको लागि मोल्डहरूको पूर्ण सेट। थप रूपमा, मोल्डको समर्थनलाई मोल्ड बेस पनि भनिन्छ। उदाहरण को लागी, डाई-कास्टिंग मेशिनले निश्चित r अनुसार मोल्डका बिभिन्न भागहरूलाई मिलाउँछ र फिक्स गर्दछ ...
इंजेक्शन मोल्डको आठ कोटिहरू के हुन्?
(१) एकल-भाग लाइन इंजेक्शन मोल्डहरू जब मोल्ड खोलिन्छ, चल मोल्ड र फिक्स्ड मोल्डलाई छुट्टिन्छ, ताकि प्लास्टिकको भाग निकालिन्छ, जसलाई एकल भाग सतह मोल्ड पनि भनिन्छ र डबल-प्लेट मोल्ड पनि भनिन्छ। । यो इंजेक्शन मोल्डको सबैभन्दा सरल र सब भन्दा आधारभूत फाराम हो। यो सी ...
प्लास्टिक ईन्जेक्शन मोल्डिंग सिकोन्टेज गुणहरू मध्ये एक हुन् जब सामग्री तापक्रम ड्रिप हुन्छ। अन्तिम वर्कपीस आयामहरू निर्धारण गर्न इंजेक्शन मोल्डिंग श्राranकेजको दर आवश्यक छ। मानले संकुचनको मात्रा सूचित गर्दछ जुन एक वर्कपीसले प्रदर्शन गरिसके पछि यसलाई हटाईएको छ ...